Wakiilka Mohamed Salah oo ka hadlay xaqiiqada ku aadan dalabka kooxda Barcelona – Gool FM
Wakiilka Mohamed Salah oo ka hadlay xaqiiqada ku aadan dalabka kooxda Barcelona
(Liverpool) 06 Juunyo 2018. Wakiilka xidiga kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Masar Mohamed Salah ee Ramy Abbas ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xaqiiqada ku aadan in Barcelona ay kasoo gudbisay dalab xidiga uu dalaalka ka yahay.
Ramy Abbas ayaa arintan ku xaqiijiyay bartiisa Twitter-ka isagoo ka hadlayay hadalkii uu sheegay wargeyska AS ee dalka Spain wuxuuna yiri: “Tani weligeed ma dhici doonto”.
Dhawaan ayay ahayd kadib markii saxaafada dalka Spain ay sheegtay in wakiilka Mohamed Salah uu kala hadlay Barcelona oo bar-tilmaameed ka dhiganeysa laacibka reer Masar suurtagalnimada ay kula saxiixan karaan, hadii ay ku fashilanto saxiixa Antoine Griezmann.
Waxaa xusid mudan in Mohammed Salah uu ku biiray Liverpool xagaagii lasoo dhaafay isagaoo u saxiixay heshiis 5 sano ah, mana heysto qiimo lagu kansali karo heshiiskiisa kooxda Reds
Kadib Koobka Aduunka ee Russia, maamulka kooxda reer England ayaa waxay qorheenayaan in ay Mohamed Salah u sameeyaan heshiis kordhin uu ku sii joogayo garoonka Anfield.
Messi oo sirtaan u sheegay Valverde markii ugu horaysay ee ay ku kulmeen tababarka Barcelona sanad ka hor